शरीर बेचेर छोरा छोरी हुर्काउछन व्रिटेनका ७० हजार आमाहरु::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
शरीर बेचेर छोरा छोरी हुर्काउछन व्रिटेनका ७० हजार आमाहरु
व्रिटेनमा ठूलो संख्यामा आमाहरु सेक्स वर्कर छन् । आखिर यहाँ यी आमाहरु आफ्नो बच्चासँगै शरीर कसरी बेच्छिन् ?
इंग्ल्याण्डको एसेक्सकी ४२ वर्षीय शेरी माथिको प्रश्नको जवाफ दिँदै भन्छिन्– ‘निश्चित रुपमा मलाई यस्तो काम गर्नमा कुनै लाज छैन् । बरु हामीलाई यसमा सम्मान पाइँदैन् र यसै कुरामा मलाई रिस उठ्छ, दुःखी पनि छु ।
शेरी पछिल्लो दुई दशकदेखि पुरुषहरुसँग सेक्सको सौदा गरिरहेकी छन् । उनी कोठा र एस्कार्ट एजेन्सीहरुसँग काम गर्छिन् । तर, कैयौ मानिसहरुका लागि यो रहस्य छ कि उनको १२ वर्षको एउटा छोरा पनि छ ।
शेरीको दोहोरो जिन्दगी निकै नियोजित । उनले आफ्नो कामबारे छोरालाई ‘म एक थिएटर रिसेप्शनिष्ट हु’ भनेर ढाटेकी छन् । उनले आफ्नो छोरालाई उनको कामको घण्टा कहिले रोकिदैन् भनेकी छन् । ताकी बच्चा हेर्ने महिलालाई यसबारेमा शंका नहोस् ।
शेरी भन्छिन्– मलाई थाहा छ कि हाम्रो बच्चालाई यसबारे थाहा भयो भने उनीहरु विरुद्धमा उभिनेछन् ।बीबीसीका अनुसार शेरीको यो घटनामा कुनै अनौठो छैन् । किनकि बेलायतमा ७२ हजार ८ सय सेक्स वर्करमा ७० हजार त आमा नै छन् । शेरी त एक प्रतिनिधि पात्र हुन् ।